भाइरल गौरीशा र सुरजको पहिलो भेटमै चल्यो रुवाबासी! अब के यो जोडी जम्छ होला त? (भिडियो हेर्नुहोस) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > भाइरल गौरीशा र सुरजको पहिलो भेटमै चल्यो रुवाबासी! अब के यो जोडी जम्छ होला त? (भिडियो हेर्नुहोस)
भाइरल गौरीशा र सुरजको पहिलो भेटमै चल्यो रुवाबासी! अब के यो जोडी जम्छ होला त? (भिडियो हेर्नुहोस)
admin January 7, 2022 भिडियो, मनोरञ्जन 0
आफुले पढ्न छोडेपनि भाईलाई पढाउनको लागि गौरिसा पोखरा मै दुई वटा होटेल मा काम गर्छिन। गौरिसा हेर्दा जति नै सुन्दर छिन त्यति नै उनका शब्द , भाब हरु छन। गौरिसा मा यस्तो प्रतिभा छ कि उनले जो कोहीलाई मोहित बनाउने गर्दछिन्। आफ्नो पढाई लाई निरन्तरता दिन नसके पनि उनको कलालाई देखेर कसैले सिरियल मा अभिनय गर्न बोलाए भने उनि होटेल मा काम गर्न छोडी जानेछु पनि भनेकी छिन।
राजधानीमै प्रेमिकालाई कोठामै राखेर यस्तो गरेपछि…
मामाले यसरी १५ बर्षिया भाञ्जी भगाए, १ महिनादेखि छैन सम्पर्क, घरमा रुवाबासी… (हेर्नुस् भिडियो)
सुन्दरी यी युवतीको यो ‘हट बेली डान्स’ TikTok मा एकाएक बन्यो भाइरल (भिडियो हेर्नुहोस)
श्रीमानले अलपत्रै पारेर बेपत्ता भईदिएपछि संगीताक‍ो यस्तो बेहाल! भन्छिन्: ‘उहाँ फर्किए म सात जुनी कुर्न तयार छु ।’ (भिडियो सहित)